Underrated Link Building Tactics nke Na-arụ Ọrụ Ihe ijuanya nke Ọma | Martech Zone
Underrated Link Building Tactics na-arụ ọrụ nke ọma na ọfụma
Tọzdee, Eprel 16, 2020 Tọzdee, Eprel 16, 2020 Oscar Florea
Ndị na-ere ahịa dijitalụ na-adabere na njikọ njikọ dị ka atụmatụ dị mkpa na njikarịcha search engine (SEO) iji mee ka ọkwa peeji ha dị na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs). Site na ndị na-ere ahịa na-arụ ọrụ iji nweta backlinks ma melite okporo ụzọ saịtị, na-ebute ụzọ, ma nweta ebumnuche ndị ọzọ, ha amụtala ịtụgharị n'ọtụtụ ụzọ ndị ewu ewu na igbe ọrụ ha.
Kedu ihe bụ backlink?
A backlink bụ clickable njikọ site na otu saịtị na gị onwe gị. Nchọgharị ọchụchọ dị ka Google jiri backlinks n'ime ogo algorithm ha. Ebe nrụọrụ ndị dị mkpa na-ejikọta ọdịnaya ahụ, ndị na-ewu ewu na-ewu ewu na-achọpụta na ha bụ. N'ihi ya, ha ga-ewetara ha elu na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs).
Gịnị bụ Link Building?
Njikọ njikọ bụ usoro ebe ndị nyocha nyocha ọchụchọ na-elele backlinks nke saịtị dị mkpa ma na-asọmpi, ma chọpụta usoro iji nwaa ị nweta njikọ site na saịtị ahụ eburu n'uche na nke ha. Site na mgbalị zuru ezu, na backlinks dị mkpa, ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbawanye ogo ya na usoro akọwapụtara na ọhụụ visiniti nyocha ya maka ngalaba ya. Ọ dị mkpa iburu n'uche na ịjikọ njikọ site na oghe, spammy, ma ọ bụ saịtị ndị na-abaghị uru nwere ike ịkwatu ogo gị - yabụ njikọ njikọ kwesịrị ilekwasị anya na saịtị ndị dị oke mkpa.
Gịnị bụ Link Building Linkzọ?
Njikọ usoro ụzọ dị ka ikenye ndị ọbịa (ebe etinyere ọdịnaya mbụ maka iduzi echiche na ibe dị iche n'ime ụlọ ọrụ), ụlọ njikọ mebiri emebi (dochie backlinks nwụrụ anwụ na ọdịnaya ka mma), na skyscraper (na-emelite ma na-akwalite ọdịnaya dị ugbu a na nke ọhụrụ na nke dị elu) backlinks dị mma) abụrụla ihe omume na ụlọ ọrụ maka oke arụmọrụ ha.
Agbanyeghị, ka ahịa dijitalụ na-aga n'ihu ịbawanye ụba, ọtụtụ ndị nwe saịtị yana webmasters na-amalite ịbubata na otu arịrịọ ahụ, na-ebelata ohere maka arịrịọ gị iji nabata. Iji nọrọ n'ihu asọmpi ahụ, ọ nwere ike ịbụ oge iji nyochaa nke ọma njikọ ụlọ si eme (IHE: Nke ahụ bụ njikọ azụ!) Nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma — ma ọ bụ ikekwe ọ ka mma karịa ndị ibe gị ama ama.
Ihe omuma ihe di n'okpuru (IHE: Ọzọkwa, usoro njikọ njikọ!) Na-ekerịta ụfọdụ ụzọ eji eme ihe: mkparịta ụka, ibe akụ, njikọ ndị mmekọ, Nyere onye na-ede akụkọ akụkọ (HARO), ndozi ihe oyiyi, njikọ profaịlụ, njikọta / ego nri, ụlọ njikọ njikọ abụọ, na ihe omume mgbasa ozi.
Site na ọtụtụ onye mbido rue na ọkwa nke etiti, a na-atụle usoro ọ bụla yana ndepụta nke omume kachasị mma ga-enyere gị aka ị nweta backlinks dị mfe.
Dabere na mkpa gị, ịnwere ike iji otu ma ọ bụ usoro nke usoro njikọ njikọ a iji bulie uru ahịa gị. I nwekwara ike mejuputa atumatu ndi a iji gbakwunye omume ulo oru gi a ma ama, na-enye gi ohere iru ebum n’obi gi nke oma.
Ga n'ihu mkpọ na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ (SERPs) nwere ike ịbụ ihe ịma aka, mana iji usoro na usoro ziri ezi, ị ga-enyerịrị nsonaazụ dị mma ma dị irè karị. Inweta atụmatụ kachasị dị mma maka mkpa gị bụ ihe gbasara ịnwale ihe ọhụrụ na ịhụ ihe kacha arụ ọrụ. Were ohere iji mepụta ihe iji usoro njikọ njikọ gị iji usoro ndị a.
Tags: backlinksatụmatụ ọdịnayaego egonyere onye nta akụkọ akaotúoyiyi reclamationụlọ njikọonye njikọq & aajụjụ na azịzaụlọ ọrụ njikọ abụọspiralytics
Oscar bụ Egwu Spiralytics ' maara ihe Ọkachamara PR ọkachamara n'ịntanetị. Mmekọrịta ụlọ ya pụrụ iche ejirila afọ ole na ole rụọ ọrụ na-enyere ụlọ ọrụ na ụdị ọrụ aka niile aka ijikwa aha ha. Nwoke a na - eri ezigbo nri ụtụtụ!
Etu esi mepụta Mgbasa ozi vidio Instagram nke na-enweta nsonaazụ gị
Ebumnuche nke data-mepụtara mgbasa ozi mgbasa ozi Jedi